स्वास्थ्यकर्मी अनियमित हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम नै प्रभावित
हुम्ला-हुम्लाका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्दा हुम्लीबासीले सास्ती भोगिरहेका छन् । भौगोलिक विकटताको कारण देखाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य संस्थामा नबसेका कारा राष्ट्रिय कार्यक्रम नै प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीका क्रममा हुम्लाका सात वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य प्रमुखले आफ्नो क्षेत्रका समस्या सुनाए । स्वास्थ्यकर्मी नियमित नहुँदा जिल्लाको समग्र स्वास्थ्य सूचकांक नै कमजोर भएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए ।
सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम हुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले सञ्चालन नगर्दा स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको छ । भर्खरै कर्मचारी समायोजनमा हुम्लाबाट कुनै स्वास्थ्य संस्थामा एक जना पनि स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत नरहने गरी सरुवा भएपछि अझ यसको मार परेको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकका अनुसार नाम्खा गाउँपालिकाको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा गर्भधारण परीक्षण गर्नको लागि महिला छैनन् । त्यसै गरी खोप कार्यक्रम पनि राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख तुलसी प्रसाद अधिकारीले बताए । गत वर्ष हुम्लामा २ जना आमाले सुत्केरी अवस्थामा ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा सुत्केरी लगायत अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि समेत समस्या भएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए । जिल्लामा २२ वटा बर्थिङ्ग सेन्टर भए पनि सबै बर्थिङ्ग सेन्टरमा सुत्केरी गराउनको लागि उपकरण नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा हुम्लामा ७ सय २४ जना महिला सुत्केरी भएको तथ्यांक छ ।
जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. टासी अञ्जुक लामाले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि आफूहरू लागि परेको भए पनि अझै केही समय लाग्ने बताए । “समस्या धेरै छन्, त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि सबै पक्षको सहयोग रहेमा चाँडै सुधार हुन्छ,” उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि प्रदेश सरकार लागिपर्ने र यहाँको समस्या बेलैमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सुशिल शाहीले बताए । सुत्केरी महिला र बालबालिकाले भिटामिन ए पनि उपभोग गर्न नपाउनु हुम्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य भएको शाहीको भनाइ थियो ।
गत वर्ष पालिकास्तरमा कार्यक्रम जाँदा अझ जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएको र बेलैमा स्वास्थ्य संस्थाले तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा हुम्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांकसमेत विश्वसनिय नरहेको देखिएको छ । कुनै पनि तथ्यांक राम्रोसँग उपलब्ध नहुँदा जिल्लाको तथ्यांक भण्डारणमा समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले सकारात्मक सोच राख्न सके चाँडै नै परिवर्तन हुने स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रतिनिधि किरण शर्माले बताए । औषधी र उपकरण ढुवानीको लागि महँगो हवाई भाडा र बजेट पर्याप्त मात्रामा मन्त्रालयले नछुट्याउँदा समस्या हुने गरेको छ ।
देशको अन्य जिल्लाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी हुम्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु दुर्भाग्य भएको सिमकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक धु्रवराज सिंहले बताए ।
जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको लागि बढी समय ड्युटी गर्नेलाई यसै वर्षबाट थप पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको अस्पताल प्रमुख डा. टसी अञ्जुक लामाले बताए । गत वर्ष ६ महिनाको लागिमात्र रकम छुट्याइएको भए पनि यस वर्षबाट पूरै वर्षको सेवा उपलव्ध गराउने लक्ष्य जिल्ला अस्पतालले राखेको र यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च हुन गएको लामाको दाबी छ । यसै वर्षबाट जिल्ला अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सहुलियत दरमा औषधी बिक्री गर्ने गरेकोले स्थानीयलाई केही सहज भएको छ ।
लप्सीफेदीमा स्वास्थ्य परीक्षण
मुटुरोगका बिरामीलाई थप सुविधा
रामपुरमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुरु
स्वास्थ्यमा पहुँच पु-याउन स्ट्रेचर वितरण
जडिबुटी खेतीलाई सहुलियत कर्जा आवश्यक
टहरामा बारपाकका दलित